Masjid lagu gubay Vänersborg | Somaliska
War cusub: Booliska ayaa sheegay in uu dabka dhaliyay qaraxyadii ay dadku ku ciyaarayeen ee Sanadka cusub ee uusan ahayn dab si kas ah loo qabadsiiyay masjid. Dhisme ay Muslimiinta ku nool magaalada Vänersborg ay ku tukan jireen ayaa dab la qabadsiiyay ayadoo ay dhowr saac qaadatay in la dabka la damiyo. Booliiska ayaa sheegay in ay aaminsanyihiin in dabka si kas ah loo qabadsiiyay dhismaha. Booliiska ayaan ilaa hada cid u soo qabad arintaan ka dhacday Vänersborg ayadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee masaajidkaan dab lagu weerar ayadoo xagaagii la soo dhaafay isla dhismahaan dab la qabadsiiyay.
War cusub: Booliska ayaa sheegay in uu dabka dhaliyay qaraxyadii ay dadku ku ciyaarayeen ee Sanadka cusub ee uusan ahayn dab si kas ah loo qabadsiiyay masjid.
Dhisme ay Muslimiinta ku nool magaalada Vänersborg ay ku tukan jireen ayaa dab la qabadsiiyay ayadoo ay dhowr saac qaadatay in la dabka la damiyo. Booliiska ayaa sheegay in ay aaminsanyihiin in dabka si kas ah loo qabadsiiyay dhismaha.
Booliiska ayaan ilaa hada cid u soo qabad arintaan ka dhacday Vänersborg ayadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee masaajidkaan dab lagu weerar ayadoo xagaagii la soo dhaafay isla dhismahaan dab la qabadsiiyay.